Dab qabsaday qaybo ka mid ah suuqa wayn ee Bakaaraha
BBC (Muqdishow ,April 29 ,2002)
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in uu dab qabsaday qaybo ka mid ah suuqa wayn ee bakaaraha.Warar hordhac ah, ayaa sheegaya in dabku uu ka bilowday halka lagu iibiyo Cawda ee suuqaasi iyo goob kudhow oo lagu iibiyo dhuxusha.
Dabkan, oo la sheegay inuu bilowday abaarihii 9 fiidnimo ee xilliga Muqdisho, iyadoo uu sii xoogaystay ilaa 11-kii fiidnimo, ayaan la ogayn sababta uu ku bilowday, inkastoo dadka qaar ay leeyihiin wuxuu ka bilowday shidaal yaallay meel bakhaar ah.
Waxaa dabka inuu baaho ka qaybqaadanaya fuustooyinka laba qarxaya oo qaar uu shidaal ku jiro, qaar kalena saliidda raashinka lagu karsado.
Ilaa hadda lama xaqiijin karo inta uu la eg yahay qasaaraha dabka, iyadoo cabsi wayn laga qabo inuu dabku ku baaho dhinaca waqooyi ee Black Sea oo ay yaalaan Haamo waawayn oo kayd shidaal ah iyo dhinaca Koonfurteed oo uu ku yaallo bacadlaha dharka, goobahaasi oo hadii uu gaaro uu dabku gaysan karo qasaaro aad u wayn.
Dadgoobjoog ah, ayaa waxay sheegayaan inay arkeen dad ay soo gaareen dhaawacyo rasaaseed, kuwaasoo ay ridayaan ilaalada suuqa si ay isaga waabiyaan rag hubaysan oo raxanraxan suuqa u imaanaya, kuwaasi oo aan la kala garaynayn inay u socdaan inay badbaadsadaan hantidooda iyo inay burcadnimo u socdaan.
Waxaa kaloo dadku sheegayaan in Ciidamada Military-ga iyo Booliiska Dowladda Ku Meelgaarka oo ku hubaysan baabuurta tiknikada ah ay gaareen si ay gacan uga gaystaan daminta dabka iyo sugidda hantida dadwaynaha suuqa taalla.Waxaa socda dadaal lagu daminayo dabka oo aad u tabaryar, iyadoo dadwaynuhu ay isku dayayaan inay damiyaan, isla markaana dadka qaar waxay sheegayaan inay arkeen laba ka mid ah baabuurta dabdamiska oo ka qaybqaadanayso daminta dabka, hase yeeshee, ay dhibaato ka haysato jidkii ay u mari lahaayeen halka uu dabka xoogiisu ka jiro.
Waxaa magaalada ilaa waqti dambe si aan looga baran u shaqaynaya gaadiidka dadwaynaha oo kala daabulaya dadwaynaha oo isaga imanaya dhamaan daafaha magaalada.